Hababka xirfadeed ee wax-u-soo-saarka Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Hababka ugu Fiican ee Loogu Gooyo Sawirada Adobe Photoshop Xirfad ahaan
Waa xaqiiqo in mid ka mid ah shaqooyinka ugu caajiska badan ee laga fogaaday ee loogu talagalay naqshadeeyaha garaafka ay tahay soo saarista lacagaha iyo walxaha. Si kastaba ha noqotee, aan kuu sheego in dhibaatadani aysan waxba ka ahayn quraafaad. Iyadoo la adeegsanayo isbeddelka weyn ee tifaftirka softwares-ka la soo maray, wax ka qabashada howlahan ayaa si aad ah u fudud oo waxaan awoodi doonnaa inaan helno 100% natiijooyin xirfad leh looma baahna inaad ku dhacdo madaxa quudiyaha.
Waa mowduuc aan dhowr jeer ku soo qaadnay boggeena, si kastaba ha noqotee, maanta waxaan ka hadli doonnaa waxa ay yihiin beddelka ugu fiican in lagu sameeyo jarista xirfadaha iyo soo saarista waqtiga rikoodhka. Casharkan maxi-casharka ah waxaynu ku gudo galaynaa kuwan oo ah kuwa ugu muhiimsan uguna xiisaha badan qalabka ay ina siiso Adobe Photoshop si loo sameeyo soo saarida:
1 Isticmaalidda burushka ku xiga wejiga maaskaro
2 Wareegga laba geesoodka ah
3 Maska sixirka
4 Adoo adeegsanaya xulashada midabka midabka
5 Qalabka qalinka
6 Qalabka Tirtirida Asalka
Isticmaalidda burushka ku xiga wejiga maaskaro
Haddii beddelkan lagu garto wax, shaki la'aan waa sababta oo ah waa tan xorriyad badan waxay na siisaa taasna waxaa loo taagay ikhtiyaar la mid ah qalabka masixi. Guud ahaan, aaladaha aan ka heli karno Adobe Photoshop gudaheeda si aan u soo saarno wax goyn iyo goynno waxaa lagu gartaa inay yihiin aalado leh xaddidyo cayiman Tusaale ahaan, polygonal lasso, oo aan gadaal ka arki doonno, wuxuu noo oggolaanayaa inaan sameyno xulashooyin iyo goynno had iyo jeer annagoo raacayna jihada qaab-dhismeed toosan. Qalabkani wuxuu ka shaqeeyaa dhibcaha barroosinka, markaa marka aan abuurno xulkeenna waxaan yeelan doonnaa meel sifeyn ah oo wax loo dhimay ah. Waxaan sidoo kale leenahay aaladda Lasso, laakiin waxay u baahan tahay fudeyd aad u weyn si loo sameeyo jaritaanno sax ah (qalabkan waxaa si weyn loogu talinayaa inaan isticmaalno kiniin garaaf ah).
Si kastaba ha noqotee, maaskaro lakabka iyo mashiinka masaxa labaduba waxay na siinayaan qalab awood u leh abuurista xulashooyin iyo goynimo leh xorriyadda guud ahaan labadaba spatially iyo kumeelgaar maxaa yeelay marwalba waan baddali karnaa qaabka xulashadeenna markasta oo aan rabno. Dhibicda laga yaabo in laga yaabo in xulashooyinkaani leeyihiin waa taas Waxay u baahan yihiin fudayd weyn markay isticmaalayaan tilmaamaha jiirka ama kiniin garaaf ah.
Waxaan kugula talinayaa in markasta oo aan doorano mid ka mid ah xulashooyinkaas aan isku dayno inaan gacanta ku hayno kiniin garaaf ah maaddaama dhaqdhaqaaqa ka imanaya uu noqon doono mid dhab ah, fudud oo la xakameyn karo iyo dabiici ahaan Laga soo bilaabo habkan koowaad waxaan dooneynaa inaan helno qaab aan ku siino natiijooyin aad u saxan goynta. Waxa aan ka gaari doonno maaskaro lakabka ah waa awoodda loo leeyahay in laga dhigo meelaha ama canaasiirta aan uga baahan nahay sawirradeenna kuwo muuqda ama aan muuqan. Sidan oo kale ayaan noqon doonnaa kor u qaadista goynta si aan toos ahayn iyo waxa ka wanaagsan iyada oo aad u ballaadhan dhinaca nabadgelyada.
Markaan usameyno sameynta iskuxirkeena (si kaduwan waxa kudhaca hababka intiisa kale) adoo adeegsanaya maaskaro goos gooska ah, "waayi maayo" meesha aad gooysay, laakiin kaliya markaan qarino waan soo celin karnaa oo waan tafatiri karnaa waqti kasta. . Waxaa jira talo aad muhiim u ah in la tixgeliyo, taasna waa in aan u isticmaalno midka ugu habboon aagga shaqada ee qalabka jira. Waxaa si weyn lagugula talinayaa inaan doorano burush yar maxaa yeelay sidan oo kale kala-goynta iyo jarista waxay noqon doontaa mid aad u sax ah.
Talaabooyinkee ayaad qaadi doontaa si aad u fuliso qaabkan? Way fududahay!
Xulashada qalabka burush (Waxaad sidoo kale ka heli kartaa amarka B ee kumbuyuutarkaaga).
Marka xigta waa inaan tagnaa lakabka aan dooneyno inaan kudhaqaaqno ka dibna riix badhanka maaskaro lakabka, "Ku dar maaskaro" kaas oo fadhiya midigta hoose ee menu-keena ama lakabka lakabka.
Daqiiqada aan abuureyno waji-gashigeena waxaan ogaaneynaa inaan iskufilan karno lakabka laftiisa ama si toos ah ku saabsan maaskaro aan hadda abuurnay. Si wax looga beddelo muuqaalka sawirkeenna loona sii wado jarista waa inaan ku shaqeynaa maaskeenna, maxaa yeelay waxaan maroojin doonnaa (mid kasta oo ka mid ah walxaha aan u aragno inay ku habboon yihiin si aan loo arkin) ayaa mudan mudnaanta.
Waxaa jira a lambarka midabka Waxaan sii wadeynaa inaan u sheegno Photoshop meelaha aan dooneyno inaan qarino iyo kuwa aan dooneyno inaan ka dhigno kuwo muuqda. Waxaan ku ciyaari doonnaa midabada hore iyo xagga dambe. Waqti kasta oo aan ku shaqeyno midabkeena hore anagoo dooraneyna madow waxaan cadeyneynaa inaan dooneyno inaan xirno ama qarino aagga maaskaro ee aan ku rinjiga ku burusheyno. Haddii kale, haddii aan u isticmaalno caddaan ahaan midabka hore, waxaan u sheegaynaa Photoshop in aan dooneyno in aan soo bandhigno meelaha aan ku xoqeyno burushkeenna ama aan ku siino burush.
Wareegga laba geesoodka ah
Kahor intaanan soo xusin qalabkan, waana mid aad dhif u ah inay noqoto mid aan laga warqabin. Fikradayda, ka dib bedelka maaskaro lakabka, tani waa aaladda na siin doonta xoriyad weyn oo dhaqdhaqaaqa iyo saxsanaanta. Xaqiiqdii waad xasuusataa in markii aad bilawday adeegsiga codsigan cajiibka ah, loo yaqaan 'polygonal loop' wuxuu ahaa wax u eg ilaah kaa badbaadiyay waqtiyadii xasaasiga ahaa ee aad wax u hagaajinaysay markii aad u baahatay soosaaraan tirooyin isku dhafan oo samee goyn horumarsan. Waana taas, in si macquul ah loo sheego, tani waxay ahayd bilowgeedii aaladda heer sare ee xulashada dahabka taajkii barnaamijyada daabacaadda. Hawlgalkeedu waa mid aad u fudud, waxaan si fudud ugu qasbanaan doonnaa inaan ka soo xusho qaanso qalabkeena ama amarka L ee kumbuyuutarkayaga ka dibna ka gudubno muuqaalkeena adoo gujinaya qodobada xulashadeena ka dhigi doona Markaad siiso qodobka koowaad oo aad ladhaqaaqdo jiirkaaga waxaad arkaysaa in xariijin muuqato markii aad samaysana qodobka labaad waxaad ogaanaysaa in khad isku xira laga sameeyay labada dhibic taas oo noqon doonta xadka xulashada aan abuureyno . Sidaad u aragto, qaabkiisu aad buu u fudud yahay oo waxaa lagu fududeeyey qasabno fudud.
Si kastaba ha noqotee, aad ayey muhiim u tahay inaad maskaxda ku hayso inay jiraan dhowr tabaha oo fududeyn kara shaqadaada marka aad la shaqeyneyso Polygonal Lasso:
Maskaxda ku hay in bedelkan aan ku abuuri karno xariiqyo gebi ahaanba toosan oo naga caawin doona inaan ku guuleysano saxsanaanta loo baahan yahay. Waxaan ka heli karnaa toosnaantan qumman khadadka xadka iyada oo loo marayo furaha shift. Dabcan waxaan sidoo kale ka faa'iideysan karnaa taliyayaasha iyo qalabka tilmaamaha ee ka imanaya meerkeenna Muuqaalka ee aagga sare.
Dhinaca kale, waxaad sidoo kale hubin kartaa inaan u wareegi karno qalabka Polygonal Lasso (L) iyo aaladda 'caadiga ah' ee Lasso ee ka timaada furaha Alt (haddii aad isticmaasho mac waxay noqon doontaa furaha Xulashada) isla waqtigaas oo aan gujineyno badhanka saxda ah ee looxkeena ama qalinkeena. Khiyaamadan ayaa lagula taliyaa haddii aad si fiican u garaneyso jiirkaaga ama qalinkaaga, haddii kale, waxaan kugula talin lahaa inaad isku daydo inaadan kala beddelin labada qaab maxaa yeelay waxay u badan tahay in xulashadaadu noqonayso wax labis aad uga yar.
Qalabkan 'lasso' dhexdooda, waxaan sidoo kale ka helnaa seddexaad, kaas oo ah loo yaqaan 'magnetic loop', inkasta oo ikhtiyaarkan aan lagu talinayn oo kaliya lagu talin doono sawirada leh qeexitaan sare iyo kala-duwanaansho sare xaddidan labadaba midabka iyo heerka iftiinka.
Markaad xulashadaada ku abuurto mid ka mid ah qalabkan, waxaad ogaan doontaa in ikhtiyaarka uu ka muuqdo aagga sare Daadi. Waa muhiim in aan u dejino halbeeggan 0 pixels isla markaana aan dhaqaajino ikhtiyaarka fudud. Sidan ayaa loo jarjarayaa wax badan oo dabiici ah.
Waxaa ka mid ah aaladaha xulashada ugu caansan ee laga helo Adobe Photoshop, waa sixirka. Si kastaba ha noqotee, aan kuu sheego taas isticmaalkeeda waxaa lagu niyad jabiyaa boqollaal badan oo munaasabado ah. Sababta ayaa ah mid aad u fudud. Qalabkan waxaa loogu talagalay in lagu abuuro xulashooyin guji fudud oo ku saleysan xuduudaha chromatic. Marka, meelahaas oo ka kooban isku af isku mid ah ayaa lagu dari doonaa xulashada gujinta.
Waxaad horeyba u ogaan doontaa waa qodobada daciifka ah ee ikhtiyaarkan uu na siinayo waana taas marka aan la shaqeyno sawirro tayo sare leh, waxay hubaal ahaan doontaa inay tahay meelaha laga sameeyay waxaa ka buuxa noocyo kala duwan oo midabo badan leh. Maskaxda ku hay in malaha meesha ay isheennu ka aragto midab isku mid ah, ay u badan tahay in tiro badan oo codad ah ay ku dhex qoran yihiin. Tani waa waxa dhaca, tusaale ahaan, cirka. Waxaa jira sawirro badan oo soo bandhiga aagag ballaaran oo buluug ah cirka, hase yeeshe markii aan la shaqeynayay noocyadaan xulashada qalabka waxaan ogaanay in waxa u eg buluug toosan oo isle'eg ay dhab ahaan ka kooban yihiin buluug aan dhammaad lahayn.
Taasi waa sababta had iyo jeer loo helo xulasho sax ah waxay noqon doontaa tan ugu adag qalabka sixirka maxaa yeelay jallaafooyinku waa kuwo maldahan oo waxaa jira isbeddelo ku dhaca afafka hore ee sawirrada iyo walxaha ay ka kooban yihiin sawirradaas. Dhibic wanaagsan oo ku saabsan qalabkan ayaa ah inay noo oggolaanayso suurtagalnimada in wax laga beddelo xasaasiyadda uu sandkeennu yeelan doono markii la dooranayo midabada. Waa waxa aan ognahay sida Dulqaad, qiime ku yaal aagga sare oo aan wax ka beddeli karno gacanta. Waxaa lagugula talinayaa inaad tijaabiso qiimahan dhowr jeer meelo kala duwan oo sawirkaaga ah si loo hubiyo dulqaadka ku habboon xallinta sawirkaaga.
Iyadoo a dulqaad sare waxa aan ku dhihi doonno codsigeena waa in gudaha aagga cirka ka samaysan muuqaalkeenna aan dooneyno inaan ku darno midabka buluugga ah ee aan gujineyno iyo sidoo kale dhammaan codadkaas oo ku dhow muuqaalkiisa koromatikada. Waxaan markaa ku dari doonnaa buluugyo fudud oo madow. Si kastaba ha noqotee, qiimahaani sidoo kale wuu kaa shaqeyn karaa adiga maxaa yeelay waxay dooran kartaa meelaha aan loo baahnayn. Maskaxda ku hay inay jiraan caleemo geed oo cirkaas ku yaal oo ay cagaar yihiin, waxay u badan tahay in iyagana lagu xushay dulqaad sare. Marka waad ka saari kartaa aagag ka badan intaad u baahan tahay.
Waxaan kugula talin lahaa inaad isticmaasho bedelkan sawirro si fiican u kala duwan chromatic ahaan oo leh a Qeexid Sare. Sidoo kale inaad qalabkan ku beddelato aaladda maaskaro lakabka. Sidan ayaad wakhti ku badbaadin kartaa oo aad u heli kartaa goyn sax ah hab aad u dhakhso badan.
Waxaad ka heli kartaa usha sixirka sanduuqa qalabka ama ka amri W kumbuyuutarkaaga. Waxaa sidoo kale si aad ah loogu talinayaa in aan dhaqaajino ikhtiyaarka jilitaanka ee ka muuqda aagga hoose maxaa yeelay qaabkan waxaan ku sameyn karnaa xulashooyin badan oo macquul ah oo taxaddar leh.
Adoo adeegsanaya xulashada midabka midabka
Maaha wax iska yimid in aan ka tago labadan qalab dhammaadka, oo labaduba aad ayey isugu egyihiin dareenka ah inay si weyn waxtar u yeelan karaan illaa inta xaalado taxane ah la buuxiyo. Si la mid ah sida ku jirta shaashadeenna sixirka ah aad ayey lagama maarmaan u tahay inaan ka shaqeyno sawirro aad u kala duwan waa isku mid runta beddelka Midabka Gamut. Waa ikhtiyaar aad u dhakhso badan oo lagu dari karo inta ka hartay xulashooyinka aan maanta soo bandhigno. Waxa aan sameyn doonno ayaa ah inaan ka qaadno shaybaarrada macluumaadka heer midab leh oo ku jira sawirkeenna mar labaad.
Hawlgalka qalabkani waa mid aad u fudud oo si fudud loo fahmi karo:
Waxa kaliya ee inala gudboon waa inaanu fureyno furaha shift kumbuyuutarkayaga isla wakhtigaas oo aan jiirka ka dhex marayno midabbada «na hortaagan» ama aan dooneyno inaan ka soo saarno sawirkeenna. Hadaan u noqono tusaalihi hore, buluuga cirka asal ahaan.
Furaha Shift waxaan ku dalbaneynaa Software-keena in lagu daro codad cusub xulashadeena, laakiin waxaan sidoo kale ka dalban karnaa ka soo horjeedka furaha Alt (ama ikhtiyaar ku saabsan Mac). Waqti kasta oo aan riixno, waxaan la xiriiri doonnaa Adobe Photoshop in aanaan rabin in hoosyada qaarkood lagu daro xulashadeenna.
Si loo gaaro xulashooyin sax ah waxaa lagugula talinayaa inaan diirada saarno goobta kooxaha midabada. Ma tagi doonno xulashada menu oo waxaan dooran doonaa midabka kala duwan ee Color si aan markaa u baabi'inno xulashada kooxaha midabada deegaanka ah. Sidii aan ku sameynay qalabka 'Wand Wand', waxay noqon doontaa mid aad muhiim u ah inaan baranno sida loo ciyaaro loona beddelo xulashada dulqaadka si aan u helno natiijada ugu fiican sawir kasta.
In kasta oo ay run tahay in qalinka (P) laga yaabo inuu yahay ikhtiyaarka ugu saxsan ee Adobe Photoshop na soo bandhigo iyada oo ay ugu wacan tahay awoodda ay u leedahay inay si fiican ugu daydo qalloocinta walxaha sameeya sawirkeenna, haddana sidoo kale waa run inay ka gaabis badan tahay oo loo baahan yahay farsamo gaar ah. Tani waa ikhtiyaarka badanaa loo isticmaalo naqshadeeyayaasha ka shaqeeya heer xirfadeed oo aad u badan kuna dadaalaya inay gaaraan natiijo fiican. soo saarista iyo goynta. Nidaamka uu qalinku ku shaqeeyo ayaa lagu shaqeeyaa wadiiqooyinka loo maro abuurista dhibco barroosinka. Qodobka ugu adag ee qalabkani waa inuu noo ogolaado isbadal gacan-ka-hadal ah waxaanan arki doonaa marka aan ka shaqeyno xariiqda aan hadda abuurnay, waxay bilaabeysaa inay qalloocdo iyadoo kuxiran dhaqdhaqaaqyada aan ku darno dariiqayaga iyo kan. qodobada barroosinka. Markaan tan ogaanno waxaan bilaabi karnaa inaan ka shaqeyno qaabab isku dhafan oo sii kordhaya. Qalabka qalinku wuxuu leeyahay dhowr tabaha oo aad muhiim u ah in la tixgeliyo maxaa yeelay iyaga oo mahadsan ayaan badbaadin doonaa waqti aad u badan oo si fiican u xakameyn doonna saameynta qalabkeenna ku yeelanaysa halabuurka:
Markii aan abuurnay oo aan qeexnay mawqifka qodobada barroosinka xulashadeenna waxaan ula ciyaari karnaa si gooni gooni ah, innagoo wax ka beddeleyno isku-duwayaashooda. Tan darteed uma baahnid wax ka badan inaad gujiso furahayaga Ctrl (ama Command on Mac) ka dibna u dhaqaaqno tilmaamaheena si aan u go'aamino booska cusub ee barta barroosinka.
Waxaan sidoo kale wax ka badali karnaa waqti kasta iyo goob kasta oo aan mari karno qalooca dariiqa ka dhashay. Tan waxaan kaliya ku qasbanaaneynaa inaan ku riixno furaha Alt (ama Xulashada Mac) oo aan la ciyaarno tilmaamaheena si aan gacan ugu habeyno baaxada qallooca la yiri.
Waxaan ka heli karnaa waddo kasta oo aan ku abuurnay qalinkeenna oo ka kooban halabuurkeenna (iyadoon loo eegin tirada waddooyinka aan abuurnay) oo ka imaan kara tabka Waddooyinka. Waddooyinkan waxaa lagu keydiyaa si aad u la mid ah lakabyada ka kooban mashruuceenna waxaana wax looga beddeli karaa qaab aad u fudud. Si aan u isticmaalno dhammaan xulashooyinkaan waxaan kaliya ku qasbanaan doonnaa inaan riixno badhanka «Xulashada wadada sida xulashada»Si loogu beddelo qaab-dhismeedkayagii dhowaa xulasho u diyaarsan-in la isticmaalo oo laga soo saaro waxyaabaha ku jira halabuurkeenna.
Qalabka Tirtirida Asalka
Anigu shakhsiyan waan aaminsanahay taas waa mid ka mid ah sababaha xiddigga loo adeegsado Adobe Photoshop, sababtoo ah jawharaddan awgeed waxba kuma hor istaagi karaan markaad wax soo saareyso, iyadoon loo eegin sida ay u adag tahay iyo iyadoon loo eegin heerkaaga naqshadeeye qaabeed. Jawharadkani wuxuu noo ogolaanayaa inaan macno ahaan ka saarno wixii asal ah inkasta oo ay ku shaqeyso samaynta shaybaarro midab ah si la mid ah sida ulaha sixirka ama ikhtiyaarka midabku u samayn karo, waxay ka shaqaysaa tilmaame. Sidan oo kale, waxay ku midaysan tahay beddelkan xorriyadda waxqabadka ee burushku na siinayo maaskaro lakabka ah iyo suurtagalnimada in lagu dhaqmo macluumaadka taariikhda leh ee sawirkeenna. Tilmaame-tilmaamehani wuxuu awood u leeyahay inuu keydiyo cufnaanta aan rabno inaan ka saarno oo ka baabi'inno meelaha jiirkeennu ku tiirsan yahay. Tani waxay ka tagi doontaa aagagga aan dooneyno inaan gebi ahaanba ku sii jirno oo waxay ku dhaqaaqi doontaa oo keliya kuwa aan dooneyno inaan tirtirno.
Waxay kaloo noo ogolaataa wax ka beddel saameynta burushkayaga laga bilaabo cabbirka dulqaadka oo wax ka beddel cabirka burushkayaga. Dabcan, waa inaan ku tababbaranaa waxyaabo badan si aan uga fogaanno in aag la ilaaliyo uu khalad ku baaba'o. Hawlgalkeedu waa mid aad u fudud:
Gudaha lakabyadaada, waa inaad doorataa lakabka aad rabto inaad jarjarto oo ay ku jiraan meelaha aad rabto inaad soo saarto.
Tag sanduuqa qalabka oo dooro qalabka qabyo qoraalka lacagaha. Waxaad ku jirtaa kooxda qabyada ah.
Guji muuska buraashka ku yaal baararka xulashooyinka sare oo qeex guryaha aad rabto in burushkaagu ka koobnaado.
Xulo qaabka aad rabto in taariikhda asalka ay u dhacdo:
lasheekeestaa masax xadka:
Haddaan dooranno aan isku xirneyn midabka tijaabada ah waa la masaxi doonaa markasta oo uu ka soo muuqdo burushkayaga hoostiisa.
Haddii halkii aan dooran lahayn ikhtiyaarka ku dhow meelaha ay ku jiraan midabkaasi oo isku xidhan midba midka kale waa laga saarayaa.
Doorashada Raadi geesaha Waxay noo oggolaan doontaa inaan tirtirno meelaha isku xiran ee ku jira midabka aan dooneyno inaan baabi'inno wuxuuna ilaaliyaa xadka habka aan u shaqeyneyno sida ugu macquulsan.
Xulo qiimaha ugu habboon ee aad kula shaqeyn karto dulqaadka. Xogtaan way kala duwanaan doontaa iyadoo kuxiran halabuurka aan ku shaqeyneyno.
Dooro ikhtiyaar ikhtiyaari ah si loo habeeyo sida burushkayagu u dhaqmayo:
Haddii aan doorano isdaba-joog ah, shaybaarrada ayaa si isdaba-joog ah loo samayn doonaa mar kasta oo aan jiidno burushkeena.
Ikhtiyaarka Marka ayaa ku habboon in laga saaro oo keliya meelaha ay ku jiraan midabka aan markii hore riixnay.
Muunada Asalka: Waxay la shaqeyn doontaa oo keliya meelaha ay ku jiraan midabka asalka ah ee aan soo xulnay.
Tallaabada xigta waxay noqon doontaa inaan ku jiidno aagga aan dooneyno inaan tirtirno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Hababka ugu Fiican ee Loogu Gooyo Sawirada Adobe Photoshop Xirfad ahaan
Habab fiican Fran mahadsanid, Salaan.
Ku jawaab jose rodriguez